Tufaaxii badalayaWiil yar noloshiis « AYAAMO TV
Tufaaxii badalayaWiil yar noloshiis
3095 Views Date January 26th, 2014 time 8:47 am
Wiil aad u wanaagsan ayaa waxa uu ka sheekenaya baahi qabatay waxa uu soo maray beer ay ka baxayso tufaax,baahidi haysay darted ayuu u cunay tufaaxii, kadib waxa uu kusoo laabtay gurigiisa,balse nafsadisa ayaa bilowday in ay eedeyn u jedinayso oo ku aadan inuusan ka amar qaadanin ninki iska lahaa beerta tufaaxda ah.
Waxa uu wiilki u yimid ninki berta lahaa galinki dambe waxa uu u sheegay in baahi xogan oo qabatay uu ku qasbanaday inuu amar la aan cuno tufaaxisa waxana ninkii uu ka dalbaday in la cafiyo.
Balse milkilihi beerta ayaa diiday dalabka wiilka oo ku aadana cafiska,waxana uu magaca eebe uu ku maray inusan cafinayn waxana uu u sheegay in maalinta qiyaamaha u qabsan doono.
Wiilka ninkii ayuu baryay,xaaladu waxa ay noqotay baryo iyo ninkii oo dhagaha is tiraya, ninkii waxa uu galay gurigiisa,wiilka ayaa ku haray afafka hore guriga milkiilaha tufaaxa waxa uu sugayay inta uu ninkasi kasoo boganayo salaada casir uu xiligasi tukunayay.
Markii uu soo baxay ayaa milkilihi aad u yabay weli wilki oo guriga taagan dhahayana,”Adeer waxan doonayaa inaan ku shaqeeyo lacag la’aan weliba ee iska kee cafi”.
Milkiilihi ayaa yiri: ”Waan ku saamaxaya laakin shardi inaad gursataa gabadheyda oo indhool ah,dhagoola ah,aana hadli Karin iyo sido kale inay jiis tahay aysan socon Karin haddii aad ogolaato wan ku saamaxayaa”.
Wiilki ayaa aqbalay soo joodinta milkilaha tufaaxa waxana loo sheegay inuu sugo waqtiga gurka.
Wilkii ayaa malintii kale yimid waxa loo sheegay inuu galo qol ay ku jirtay gabadha,qolkiba waxa ku jirta gabar aad u qurxon oo ka qurxoon weliba dayaxa,way soo dhaqaqday waxa ayna salantay iyadoo fahansan waxa maankisa ka guxaya.
Waxa ay tiri:”Aniga indhoola ayaan ahay waxana ka ahey waxyabaha xaraamka ah,mana hadli karo wayo kuma hadlo waxyaabo xaraam ah,waxna ma arko mana arko waxyabaha xaraamka ah mana socon karo lugahyega uma qado talaabo mel xaram ah.”.
Waxa ay u sheegtay sida aabaheda u baadi goobayay wiil ilaah ka baqaya oo ay nafsadisa xitaa cabsi gashay markii wuxusan lahayn cunay.
Sanad kadib guurkooda waxa ay u dhashay wiil,,hadaba ma taqaan wilkaasi
magaciisa.? Waa Al-imam Abu Xaniifa